Natasha Stefanenko - साथ विलासिता महिला मोडेल देखिन्छ र उच्च बुद्धि। हामी धेरै गर्न यो कार्यक्रम मा परिचित छ "तुरुन्तै हटाउने!" (सीसीसी)। त्यो अध्ययन र हाम्रो हेरोइन जन्म भएको थियो जहाँ जान्न चाहनुहुन्छ? कसरी उनको व्यक्तिगत जीवन गरे? सबै आवश्यक जानकारी लेखमा समावेश गरिएको छ।
Natasha Stefanenko: जीवनी, परिवार र बाल्यकाल
त्यो 1971 मा जन्म भएको थियो (अप्रिल 18), को बन्द सैन्य वन को टाउन Sverdlovsk क्षेत्र मा स्थित मा। के मा परिवार हुर्केका थियो पोडियम र टेलिभिजन एक भविष्य तारा? Natasha आमा एक किंडरगार्टन मा एक शिक्षकको रूपमा काम गरे। मेरो बुबा "आणविक इन्जिनियर" मा एक डिग्री संग स्नातक।
हाम्रो हेरोइन अप सक्रिय र सक्रिय केटी भयो। Girlfriends त्यो लगभग थिएन। Natasha Stefanenko जहाँ यो सबै सम्मान र पनि मानिसहरू डराउँदैनन् boyish कम्पनी उपयुक्त।
स्कूलमा, त्यो चार र पाँच मा अध्ययन। नतालिया मनपर्ने बिषय चित्रकला थिए, भौतिक शिक्षा र संगीत। धेरै पटक एक हप्ताको केटी पौडिरहेका खण्ड भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यो यस खेल मा धेरै सफलता हासिल गरेको छ। Natasha को युवा ओलम्पिक टोली मा प्राप्त गर्न हरेक मौका थियो। तर केही बिन्दुमा Stefanenko खेल संग "संलग्न" गर्ने निर्णय गरे।
उच्च विद्यालय देखि स्नातक पछि त्यो IISS कागजातहरू दायर। त्यो एक पटक उनको बुबा द्वारा प्रशिक्षित जो एउटै संकाय, छनौट गरे। नतालिया एक इन्जिनियर-metallurgist हुनुपर्ने थियो। तर विश्वविद्यालय मेरो अध्ययन पूरा गर्न, र त्यो कुनै मौका थियो उपाधि प्राप्त।
1991 मा, न्यूयोर्क डिजाइनर मध्ये एक मास्को मा एक सौन्दर्य प्रतियोगिता प्रबन्ध छ। उनको साथीहरूसँग कम्पनी हाम्रो हेरोइन उहाँलाई गए। प्रतियोगिता एकदम उच्च थियो। नतालिया प्रेमिका कास्टिङ जाने सकेन। तर प्रकाश आँखा संग गोरा केटी चयन समिति सदस्यहरू तुरुन्तै पहिचान। तिनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका मा Stefanenko काम प्रस्ताव राखे। रूसी सौन्दर्य एक सानो भ्रमित। आखिर, त्यो मोडेलिंग क्यारियर को सपना देख्यो कहिल्यै थियो। र यहाँ त्यो मौका दिइएको छ। तथापि, नतालिया संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा गर्न इन्कार गरे।
त्यो उपाधि लेखन समाप्त, यो बचाव र इटाली गए। हाम्रो देशमा, त्यसपछि यो धातु थियो। र यो पूर्ण बुझ्ने गरिन्छ। मिलान यी वर्ण प्रकार Natasha Stefanenko जस्तै माग थिए। उचाइ, तौल बालिका यसलाई सफल मोडेल बन्न अनुमति छ। रूसी सौन्दर्य इटाली मा सबै भन्दा राम्रो फोटोग्राफर र डिजाइनर काम थियो। 187cm को वृद्धि संग त्यो 60 किलो वजन। कुनै पनि लुगा उनको उत्कृष्ट देख्यो। छोटो समयमा त्यो रनवे मा राम्ररी हिंड्न र एक तस्वीर को लागि खडा गर्न सिके।
1992 मा, Natasha Stefanenko (फोटो हेर्नुहोस्। माथि) गतिविधिको नयाँ क्षेत्र विकास सुरु भएको छ। यो सबै त्यो रेस्टुरेन्ट वर्ष मा एक ठोस मानिस द्वारा नजिक थियो भन्ने तथ्यलाई सुरु र टिभि प्रस्तोता बन्न सौन्दर्य प्रस्ताव राखे। त्यसैले नतालिया एक लोकप्रिय टक शो मा पायो। त्यो एक प्रसिद्ध मास्टर संग जोडीएको गर्न भएको थियो। मात्र नकारात्मक त्यो इटालियन भाषा थाहा थिएन भन्ने तथ्यलाई थियो। त्यो पाठ्यक्रम मा भर्ना भए। केही हप्ता भित्र Stefanenko निर्धक्क फ्रेम मा आयोजित।
2007 मा, रूसी च्यानल सीटीसी प्रतिनिधिको Natasha सम्पर्क गर्नुभयो। तिनीहरूले उनको कार्यक्रम "तुरुन्तै हटाउने!" इटाली बस्ने हाम्रो compatriot, विचार गर्न समय लिएर एक सह-पाहुना Tashi स्टर्न बन्न निमन्त्रणा। फलस्वरूप, त्यो सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए।
धेरै वर्ष को लागि, Natasha Stefanenko र Tasha Strogaya यो ठूलो गियर नेतृत्व। तिनीहरूले आंकडा को मर्यादा emphasizing र यसको कमीकमजोरी disguising, साधारण बालिका र महिला stylishly पोशाक मदत।
2014 मा, नतालिया Stefanenko एक मोहक प्रस्ताव प्राप्त - अग्रणी परियोजना बन्न "रूसी मा शीर्ष मोडेल"। सीटीसी च्यानल पुस्तिका गल्ति उनको उम्मीदवारी स्वीकृत गर्दैन। को गोरा चार मौसम लागि "इटालियन शीर्ष मोडेल" प्रसारण थाले भन्ने तथ्यलाई। त्यो आवश्यक अनुभव छ। Stefanenko वाहेक मोडेलिंग व्यापार सीधै सम्बन्धित छ। त्यो भान्सा भित्र यो थाह छ।
रचनात्मक piggy Natasha - चलचित्र र टेलिभिजन श्रृंखला केही भूमिकाको। तिनीहरूमध्ये "मरियम को नाम मा" "ठूलो आलुबखडा" (1999), «Gioco di specchi» (2000), (2010) र अरूलाई जस्तै फिलिमहरु छन्।
किशोर, जसको वृद्धि औसत भन्दा माथि थियो Natasha Stefanenko, आफु कुरुप मानिन्छ। त्यो यो पनि हल्का छाला र ungainly आंकडा छ जस्तो छैन। तथापि, 17 वर्ष मा, हाम्रो हेरोइन एक प्रेमी पायो। Natasha compliments संग बौछार चलचित्रहरू, आमन्त्रित फूल दिनुभयो पछि यो सुन्दर देख्यो छ। त्यो अध्ययन गर्न मास्को गए जब आफ्नो सम्बन्ध समाप्त भयो।
उनको भविष्य पति, LUCA Sabbioni, नतालिया इटाली भेटे। यो 1993 मा भयो। उहाँले व्यवस्था स्कूलमा अध्ययन, र आफ्नो खाली समय मा, एक मोडेल रूपमा काम गरे। नियमित सुविधाहरू अग्लो गोरा उहाँले तुरुन्तै मन परायो। लूका रूसी सौन्दर्य वू आफ्नो सर्वश्रेष्ठ गरे। वर्ष को एक जोडी मान्नेहरूले एक नागरिक विवाहमा थिए। र 1995 मा, तिनीहरूले आफ्नो सम्बन्ध formalized।
चाँडै लूका र नैनाले आमाबाबुले हुन्छन्। उहाँले आफ्नो छोरी Alexandra जन्म भएको थियो। लामो समय को लागि जोडी दोस्रो बच्चा (प्राथमिकताको एक छोरा) को सपना देख्यो। तर भाग्य आफ्नै तरिका थियो।
Natasha Stefanenko र पतिको इटाली बाँचिरहेका छौं। र हाम्रो देशमा तिनीहरूले मात्र काम क्षणमा मा आउनुहोस्। लूका सुशील लुगा र जुत्ता सिर्जना गरिएको छ। धेरै वर्ष को लागि, उहाँले युरोपेली देशहरूमा धेरै लोकप्रिय छ जो आफ्नो ब्रान्ड, मालिक छ।
आफ्नो मात्र छोरी, Alexandra अप भयो। त्यो तीन भाषाहरू (सहित रूसी) थाह छ। केटी आफ्नो बुबा punchy वर्ण देखि जन्मजात थियो, र आफ्नो आमा देखि - उच्च वृद्धि र आकर्षक उपस्थिति।
परिवार-Sabbioni Stefanenko मात्र होइन इटाली अचल सम्पत्ति मालिक हो। तिनीहरूले पनि ब्राजिलमा एक ठूलो घर छ। यसलाई निकट भविष्यमा नतालिया रूसी राजधानी मा घर प्राप्त सम्भव छ।
धेरै मानिसहरू असल प्रस्तोता र पतिको ईर्ष्या छन्। तिनीहरूलाई को एक जोडी पछि सुखी परिवार को एक मोडेल छ। तिनीहरूले 20 वर्ष पहिले थिए उनि धेरै एकअर्कालाई प्रेम।
Stefanenko नतालिया अचम्मको देखिन्छ। तर उनको 45 वर्ष। उनको युवा र सौन्दर्य को रहस्य के हो? फिट प्रस्तोता रन मद्दत गर्छ राख्नुहोस्। यस त्यो एक दिन 1-1.5 घण्टा बिताउँछन्। धेरै पटक एक हप्ताको, हाम्रो हेरोइन एक जिम र टर्की स्नान दौरा।
खाना लागि, यो उचित पोषण चयन। यो सबै माथि, फल, तरकारी, सलाद, दलिया र समुद्री। अत्यन्तै दुर्लभ टिभी प्रस्तोता पनीर संग पास्ता खान र राम्रो रक्सी एक गिलास पिउने उठयो गर्न सक्दैन।
को अनुहार छाला ताजा र स्वस्थ थियो, नतालिया सुत्न खोज्छ। र अझै पनि पानी 2-3 घण्टा सुनिंनु जोगिन गर्न, सुत्नेसमय अघि पिउन गर्न आवश्यक छ। बिहान, त्यो बरफ संग अनुहार पोंछे। धेरै पटक एक हप्ताको प्राकृतिक उत्पादनहरू प्रयोग प्रस्तोता मास्क गर्छ। यो खीरे, जामुन र फल हुन सक्छ।
Natasha Stefanenko मायालु पत्नी र आमा। एक वास्तविक workaholic - र यो छ। सुन्दर गोरा इटाली र रूस मा धेरै टेलिभिजन परियोजनामा तारा अङ्कित गर्न प्रबन्धन। यो उनको आफ्नो क्यारियर र परिवार राम्रो-हुनुमा हरेक सफलता इच्छा रहन्छ!
जीवनी Kirilla Kyaro। आफ्नो सहभागिता संग सबै भन्दा प्रसिद्ध फिलिमहरु
डरेन Shahlavi: जीवनी र अभिनेता को फोटो
एक प्रकार को बेल गुलाबी पहाड: रोपण र मर्मतका, समीक्षा, फोटो
संगीतकार Borodin पी:। जीवनी, रचनात्मकता, फोटो
प्रेरितहरूको मा पवित्र आत्मा को वंश। प्रेरितहरूको मा पवित्र आत्मा को मूल को भोज
तपाईं कसरी सोची समय खर्च गर्न थाहा छैन? Arboretum - यो आवश्यकता के हो!